बाँकेमा मृतकको संख्या दुई सय कट्यो – sunpani.com
सुनपानी । २९ बैशाख २०७८, बुधबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – बाँकेमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या दुई सय कटेको छ ।
जिल्लाका दुई ठूला अस्पतालमा चौविस घण्टा नवित्दै १६ जनाको मृत्यु हुँदा बाँकेका नौ जना परेपछि कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको आँकडा दुई सय पार गरेको हो । बाँकेमा २०७७ साल जेठ ३ गतेबाट मृत्युको सिलसिला शुरु भएको भएको थियो ।
कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भएपछि धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । पछिल्लो दिनमा बाँकेको भेरी अस्पताल र कोहलपुर मेडिकल कलेजमा बाँके र बाहिरी जिल्लाका दर्जन बढी संक्रमितको मृत्यु भइरहेको छ ।
जिल्लामा दैनिक पाँच सय बढी संक्रमित थप भइरहेका छन् । बेडको अभाव विस्तारै व्यवस्थापन हुँदै गएको बाँकेमा अक्सिजनको समस्या रहदै आएको छ । बाँकेका दुई ठूला अस्पतालमा जिल्लाको मात्रै नभएर छिमेकी जिल्लाहरुका विरामीको चाप बढ्दो रहेको छ ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र, बर्दियाका फोकलपर्सन नरेश श्रेष्ठका अनुसार, मंगलबार रातभरी र बुधबार दिउँसोसम्ममा १६ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिकाका ६५ वर्षीय पुरुषको भेरीमा मृत्यु भएको छ । बैशाख २२ गते पीसीआर गरिएका उनलाई २३ गते भर्ना गरिएको थियो । कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ११ का ४१ वर्षीय पुरुषको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको छ । बैशाख २३ गते पीसीआर गरिएका उनलाई २५ गते भर्ना गरिएको थियो ।
कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १४ का ६४ वर्षीया महिलाको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको छ । बैशाख २३ गते पीसीआर गरिएका उनलाई २४ गते भर्ना गरिएको थियो । दाङ तुलसीपुर नगरपालिकाका ६६ वर्षीय पुरुको भेरीमा मृत्यु भएको छ । बैशाख २२ गते पीसीआर गरिएका उनलाई त्यही दिन भर्ना गरिएको थियो । बर्दिया बाँसगढी नगरपालिका वडा नं. ९ का ६४ वर्षीय पुरुषको भेरीमा मृत्यु भएको छ । बैशाख २४ गते पीसीआर गरिएका उनलाई २६ गते भर्ना गरिएको थियो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ का ६६ वर्षीय पुरुषको भेरीमा मृत्यु भएको छ । बैशाख १३ गते भर्ना भएका उनलाई २३ गते पीसीआर गरिएको थियो ।
कोहलपुर नगरपालिकाका ७० वर्षीया महिलाको होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएको छ । बैशाख २७ गते भेरीमा पीसीआर गरिएका उनलाई होम आइसोलेसनमा राखिएको थियो । उनको राती घरमै मृत्यु भएको छ । खजुरा गाउँपालिका वडा नं. १ का ४३ वर्षीय पुरुषको भेरीमा मृत्यु भएको छ । बैशाख ९ गते पीसीआर गरिएका उनलाई १० गते भर्ना गरिएको थियो ।
योसँगै बाँकेमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या दुई सय सात जना पुगेको छ । बाहिरी जिल्लाबाट उपचार गराउन आउदा मृत्यु हुनेको संख्या एक सय ५८ जना पुगेको छ ।